Al-shabaab oo dhowr madaafiic ku weerartay magaalada Garbahaarey – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Al-shabaab oo dhowr madaafiic ku weerartay magaalada Garbahaarey
Wararka naga soo gaaraya magaalada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo ayaa sheegaya in dagaalyahanada Al-shabaab ay habeenkii xalay madaafiic culus ku garaaceen saldhiga ciidamada Itoobiya ee ku yaalla magaaladaasi.
Guddoomiyaha magaalada Garbahaarey Iimaan Cadoow Kaarshe oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in madaafiicdaas ay ku dhaceen qeybo ka mid ah gudaha magaalada, balse aysan geysan wax qasaare ah.
Guddoomiyaha oo ku eedeeyay in madaafiicdaasi ay soo rideen dagaalyahanadda Al-shabaab ayaa sheegay in Shabaabka aysan awood u laheyn inay weerar toos ah ku qaadan magaalada Garbahaarey, balse uun ay qalqal geliyaan shacabka ku nool halkaas.
Dhinaca kale, saraakiisha Al-shabaab ayaa shaaciyay in weerarkaasi ay ku dileen ciidamo badan oo ka tirsan kuwa Itoobiya ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada Garbahaarey.
Ma jirto warar madax banaan oo xaqiijinaya qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay madaafiicdaas.
Dagaalyahanadda Al-shabaab ayaa inta badan weeraro madaafiic ah kasoo tuura duuleedka magaalada Garbahaarey, waxaana magaaladaasi muddo ku dhaw 10 sano gacanta ku haaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya.